Azịza ngwa ngwa: A ga-enwe okirikiri 25 nke Antm - BikeHike
Azịza ngwa ngwa: A ga-enwe okirikiri 25 nke Antm
Onwere onye si ANTM nwuru?
Gịnị kpatara ndị Jays ji hapụ ANTM?
Amanda Antm ọ kpuru ìsì?
Angelea Preston ọ na-eme ihe ngosi?
Jay Manuel ọ bụ onye Spen?
Ebee ka Miss Jay nọ ugbu a?
A na-akwụ ndị asọmpi ANTM ụgwọ?
Kedu onye meriri ANTM Cycle 3?
Kedu ihe Tiffany mere na ANTM?
Kedu onye meriri ANTM All Stars?
Kedu onye meriri ANTM 18?
Jay Manuel ọ bụ onye India?
Tyra Bank ọ lụrụ?
Maazị na Oriakụ Jay alụwo?
Ego ole ka Tyra Banks na-akwụ?
Ego ole nke ANTM ka edere?
Kedu mgbe ANTM kwụsịrị?
Onwere ANTM mere ya nnukwu?
CoverGirl na-ahọrọ onye mmeri nke ANTM?
Angelea Preston ọ meriri ANTM?
Onye zuru kristal Amanda?
A ga-enwe Cycle 21 ANTM?
Afọ ole Eva ANTM dị?
Jay Alexander dị afọ ole?
Ebee ka Brittany si na America na-esote Top Model?
Ogologo okirikiri ANTM ole dị?
Tyra Banks dị afọ ole?
Onye meriri Cycle 20 nke ANTM?
Kedu afọ bụ Cycle 20 nke ANTM?
Kedu onye meriri ANTM Cycle 21?
Kedu ka Tyra Banks dị ogologo?
Ọnye na-bụ Tyra Banks makeup artist?
Kedu obodo Mr Jay si na ANTM?
Ogologo oge ole ka Jay Manuel dị?
Tyra ọ nwere nwa?
Tyra Banks nwere nwoke?
Olee mgbe Tyra na Erik malitere ịkpa?
Ọnye na-bụ Nigel Barker lụrụ?
Cycle 25 of America's Next Top Model bụ okirikiri na-abịa nke a na-eche na ọ ga-amalite na VH1 oge ụfọdụ na 2019. Dị ka nke 2020, ọ dịghị ọkwa ọkwa e mere. Ụlọ nke Dragọn Trailer - The Loop. Cycle 25 Ọwa izizi: VH1 Premiere: TBA Ozi Cycle Ndị Ikpe: Tyra Banks.
2016: Kimberly Rydzewski (cycle 10) nwụrụ na Disemba 19, 2016. Ọ dị afọ 29. 2018: Na Disemba 4, 2018 Jael Strauss (usoro okirikiri 8) nwụrụ mgbe ọ dị afọ 34 n'ihi ọrịa ara ara 4.
Mkpebi ịpụ na ANTM, o kwuru, bụ "100%" nke ya. Dị ka Manuel kọwara, ọ chere na ọ bụ oge ịkwaga ọrụ ya "n'ụzọ dị iche" site na ụzọ ọ chọtara onwe ya mgbe 18 cycles nke America na-esote Top Model.
Ezinụlọ Swafford kwagara Plano, Texas n'oge ọ bụ nwata. Swafford kpuru ìsì n'ụzọ iwu kwadoro; retinitis pigmentosa na-arịa ya, ọnọdụ anya na-emebi emebi. Swafford ekwuola na ọnọdụ ahụ ga-ahapụ ya ka ọ kpuo ìsì mgbe ọ dị afọ 30.
Angelea Preston bụ ụdị ejiji ndị America, nke a kacha mara amara maka ngosipụta atọ ya dịka onye asọmpi na ANTM. Ọ pụtara na okirikiri 12, 14 na 17.
Wenezdee gara aga, na ihe omume nke E! pọdkastị akụkọ Just the Sip, Manuel buru ụzọ gwa ndị Fans bụ ndị na-echekarị banyere agbụrụ ya. N'agbanyeghị ịkọ nkọ, o doro anya na ọ bụghị Latino. Ọ bụ ezie na ọ si South Africa na agbụrụ agbụrụ - ya na otu nne na nna ojii na onye ọcha.
Alexander ma ọ bụ Miss J, bụ ezigbo ihe onyonyo nke America na onye nkuzi runway kacha mara amara maka ọrụ ya na America's Next Top Model. Ọ na-eme njem dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ejiji na imepụta ihe. Alexander bi na Paris na New York City.
Ndị na-asọmpi ANTM na-enweta ụgwọ ọnwa $40 kwa ụbọchị Ọ na-ekwu na a na-akwụ nwa agbọghọ ọ bụla “nkwụ ụgwọ $40 kwa ụbọchị nke na-aga nri, ma nke ahụ bụ nanị ego anyị nwetara maka ime ihe ngosi ahụ. Sarah Hartshorne abụghị naanị ANTM alum ikwupụta ihe mere n'ezie n'azụ ihe nkiri.
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-atụ anya ka ọtụtụ ihe ngosi telivishọn bụ ndị na-emepụta ihe chepụtara ma dee ya. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe na America's Next Top Model. N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe ngosi ahụ edeghị ihe ọ bụla, yabụ na ihe niile ị hụrụ mere n'ezie.
Eva Marcille Pigford (Cycle 3) Mgbe ahụ: Otu n'ime ndị asọmpi ANTM na-echefu echefu, Pigford meriri okirikiri nke atọ na 2004.
Tiffany Richardson bụ onye asọmpi na Cycle 4 nke ANTM na 2005, ebe ewepụrụ ya na mkpochapụ okpukpu abụọ yana Rebecca. O doro anya na oge kachasị echefu echefu na akụkọ ihe mere eme nke Top Model, A maara ya maka iwe Tyra Banks nke ukwuu na mkpochapụ ya nke na Banks malitere iti ya mkpu.
A mụrụ Manuel na Springfield, Illinois nye nne nke ndị Ịtali na Czech na nna South Africa nke sitere na Cape Malay agwakọta.
Tyra Banks Height 5 ft 10 na (1.78m) Television America's Next Top Model The Tyra Banks Show America's Got Talent FABLife Dancing with the Stars Partner (s) Erik Asla (2013–2017) Ụmụaka 1.
Jay na-achọ idobe ndụ ịhụnanya ya na nzuzo, mana n'oge a, akụkọ ejiji na ụdị TV mbụ na-adị ka ọ na-ebi ndụ otu, dị ka Live Ramp Up si kwuo. N'agbanyeghị na-emechi emechi banyere ndụ ịhụnanya ya, Jay na-akwado oge niile maka ikike LGBT dị ka nwoke nwere mmasị nwoke n'ezoghị ọnụ.
Dabere na Celebrity Net Worth, Tyra nwere atụmatụ nha nha ruru nde $90 dịka nke 2020.
17) N'adịghị ka ihe ngosi eziokwu ndị ọzọ, ANTM abụghị ederede.
Ọtụtụ n'ime ndị na-asọ mpi na ANTM hụrụ ọrụ ha na-agba ọsọ, ma e nwere ụfọdụ ndị gbanarịrị ọbụbụ ọnụ Tyra wee nweta ihe ịga nke ọma mgbe ha nọ na ngosi ahụ. Ọ bụ ezie na America's Next Top Model kwuru na ọ bụ ihe ngosi asọmpi ịme ngosi, ụdị dị elu ole na ole pụtara na usoro a.
Enweela ọtụtụ esemokwu gbara gburugburu America's Next Top Model: All Stars kemgbe ngwụcha Wednesde, na onye ọka ikpe mbụ Janice Dickinson abụghị naanị na-eguzo nwayọ n'akụkụ. "CoverGirl bụ ndị na-ahọrọ ihe nlereanya - ọ bụghị nke ọ bụla n'ime ndị ikpe.
N'agbanyeghị inwe mmalite okwute mara mma n'oge ahụ, Preston na-ewetara ya ihe ịma aka niile kwa izu, na ka ọ na-erule oge ikpeazụ, edoro ya okpueze onye mmeri.
N'ime omume kacha mma nke ndị omempụ, Eva the Thieva na-ewepụ kristal Amanda ma tụpụ ha n'akụkụ ụgbọ mmiri iji zoo ihe akaebe.
Will Jardell bụ onye asọmpi na okirikiri 21 nke ANTM na 2014. Ọ bụ onye gbara ọsọ.
Ọ gara Mahadum Clark Atlanta dị na Atlanta, Georgia; otu o sila dị, ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ obere oge ka o meriri oge nke atọ nke Model na-esote America na afọ 19.
Afọ 63 (Eprel 12, 1958).
Brower abanyela na njikwa Model na-esote na LA, Passport na San Francisco na njikwa Reel. Dị ka nke 2019, ọ bịanyere aka na TNG Models.
Ọ nweghị ihe dị ka ndọpụ uche ọha mmadụ iji nye gị oge iji letagharịa “usoro okirikiri” 24 niile (oge aka) nke America na-esote Top Model, nke niile dị ugbu a na Amazon Prime.
Afọ 47 (Decemba 4, 1973).
2013 America's Next Top Model Original network The CW Original ntọhapụ August 2 – Nọvemba 15, 2013 Oge nhazi oge Ndepụta nke emume.
5 ′ 10 ″.
Onye na-ese etemeete Jay Manuel na-emepe maka mmekọrịta ya na Tyra Banks kemgbe ọ kwụsịrị na ihe ngosi asọmpi egwu, Ihe Nlereanya Na-esote America na 2012.
6 ′ 1 ″.
Mgbe ọ naghị anabata "Ịgba egwu na kpakpando" ma na-arụ ọrụ imeghe ogige ntụrụndụ ModelLand, Tyra Banks ka ya na enyi ya nwoke, Louis Bélanger-Martin hụrụ.
Nrọ nke ụlọ akụ ịbụ nne mezuru na onye na-ese foto Norwegian bụ Erik Asla. Ha abụọ malitere ịlụ na 2013, a mụrụ nwa ha nwoke na 2016.
Ajụjụ: Anyị nwere ike nwetaghachi Tyra maka okirikiri Antm 24
Azịza ọsọ ọsọ: Onye meriri Antm Cycle 19
Ajụjụ: Onye meriri Antm Cycle 21
Ajụjụ: Onye meriri Antm Cycle 22
Ajụjụ: Onye meriri Antm Cycle 1
Ajụjụ: Onye meriri okirikiri 20 Antm
Ajụjụ: Onye meriri Antm Cycle 23
Onye meriri Antm Cycle 13
Azịza ọsọ ọsọ: Onye meriri Antm Cycle 10
Onye meriri Antm Cycle 11
Ajụjụ: Onye meriri Antm Cycle 18
Azịza ọsọ ọsọ: Onye meriri Antm Cycle 11
Agụụ Agụụ Otu esi edozi Marble na-enyo enyo
Azịza ọsọ ọsọ: Agụụ Agụla ka esi arụkwa ihe ọkpụkpụ Marble
Agụụ Agụụ Otu esi edozi ụgbọ mmiri
Adịla Mmezi Ala ọmajiji Agụụ
Ajụjụ: Emezighachila ụlọ elu naanị tinye akwa mkpuchi anyanwụ karịa ochie
Azịza ngwa ngwa: Emezighachila akwụkwọ ọbá akwụkwọ
Ajụjụ: Emeziela Granite na Edge
Adịla akwụkwọ ndị ahụ ndozi ala
Achọla ozi mperi onye ọrụ mgbe nchekwa data nweta kọmpat
Azịza ngwa ngwa: Akwụla ọrụ maka ndozi Kenmore Elite Compressor